Midona amin’ny tamboho tanteraka ny minisiteran’ny serasera. Ny fampitana mivantana ny 26 jona natao tamin'ny Tvm tamin'ity taona ity no isan'ny ratsy indrindra teto amin'ny tantara-pirenena ary feno fanakianana izany tetsy sy teroa.
Tsy mahafehy ny sehatra ireo mpitantara no miteniteny foana mitarika hatramin'ny resaka fanavakavaham-bolon-koditra. Tsy voafehy ihany koa ny lafiny teknika indrindra fa ny feo kanefa dia efa amam-polo taonany no nanaovana an'io fampitana mivantana io. Midina tanteraka ny fijerin’ny olona ny minisiteran’ny serasera sy ny ekipany.
NIHEVI-TENA HO TAPI-PAHAIZANA
Tadiavina ho ireo mpanao gazety indray no horoahina momba ny tsy fietezana omaly. Ekena ny tsy fahafehezan’izy ireo ny asany no ho tsy fahafahantarana ilay sehatra hotantaraina mivantana, fa kosa iza no tompon’andraikitra nanendry ary tsy mba nisy andràna akory ve alohan’ny fanendrena ? Manarak’izay, tsy mba nisy fakana lesona tamin’ny nataon’ny teo aloha ve, dia ny fakana ny manam-pahaizana isam-bondrona (miaramila, zandary, polisy, mpandraharahan’ny fonja…) hanampy amin’ny fitantarana ny matso. Heverin’ny minisiteran’ny serasera fa hainy avokoa ny zava-drehetra dia ireny no vokany.
VOAHILIKA KANEFA NIASA MAFY
Maro ny tsy nahazo fanasàna teny Mahamasina kanefa isan’ny niasa mafy tamin’ny fanatontosana iny hetsika iny. Sendaotra ny maro tamin’izy ireo omaly satria toa lasa misy fanavakavahana izany tamin’ny fanasàna ny olona, indrindra ny tompon’andraikitra ambony izay nentina teny. Lasa mifampiahiahy ankehitriny ny samy lehibe satria iaraha-mahalala ny fitiavan’ny malagasy mpitondra voninahitra. Toa fanompàna azy ireo izany hoe tsy nankeny Mahamasina izany amin’ny toerana izay tazominy.
VOATAFIKA NY GALANA ANKORONDRANO
Nisy nanafika ny Galana Ankorondrano ny alin’ny 25 jona. Efa teo am-piomanana ny hanidy tsena ity toeram-pivarotan-tsolika ity no tonga ary niandry ireo fiara faramparany izay naka solika ho vita. Teo no tonga tampoka ny roa lahy mitam-basy ary naka ny vola teny amin’ny pompistes, tao anaty trano ary koa tamin’ireo mpamily fiara izay tratran’izy ireo teo. Tonga teo ny minisitry ny polisy nony avy eo ary nanentana mba tsy hisalasala ny hiantso azy ireo rehefa misy ny asan-jiolahy. Tsy efa izany foana ve moa ?
VOAKIANA NY MPITANDRO FILAMINA
Nataon’ny fikambanana iraisam-pirenena mpanara-maso ny zon’olombelona, Amnesty International, ho mifanandrify amin’ny fankalazana ny fetim-pirenena izay sady fetin’ny foloalindahy ny fanambaràny mahakasika an’i Madagasikara. Izany dia momba ny tokony handraisana fepetra maika sy matotra mba hampitsaharan’ny mpitandro ny filaminana malagasy ny famonoan’olona etsy sy eroa. Notanisain’izy ireo avokoa ny tranga mahatsiravina rehetra mba hanaporofony fa araky ny maso iraisam-pirenena ny tsy fanajàna ny vonoan’olona ataon’ireo mpitandro ny filaminana eto amintsika. Fantsy tanteraka.
RAHARAHA TSIPOAPOAKA TANY TOAMASINA
Raha tsy nitatatata tamin’ny haino aman-jery sy ny gazety isan-karazany ny havan’ilay ramatoa nitondra vohoka izay nidoboka am-ponja tao Toamasina dia tsy afaka mihitsy io farany. Nandeha ny fitsaràna ary nahazo fahafahana noho ny fisalasalàna izy. Raha tsiahivina dia mba niteny ny zaza iray izay hay zanaka mpitsara, izy ny mba hanapoahana tsipoapoaka eo amin’ny tokontaniny. Avy hatrany anefa dia tezitra ny renin’ilay zaza, izay mpitsara, raha naheno izany ary nampihatra ny fahefany ka nampidoboka am-ponja olona.